Shiinaha Wiir Brand Gudaha gudaha qulqulka biyaha heerka sare ee haanta biyaha haanta biyaha sabayn kubbadda soo saaraha iyo Soo-saare | Weier
1/2 "Dulucda Sare
Nooca Wiir si buuxda oo otomaatig ah u xakamaynta heerka biyaha ...
Nooca Wiir Gudaha nooca qulqulka qulqulka biyaha sare ee haanta biyaha ee haanta biyaha
WEIER ama OEM
Heerkulka caadiga ah
Caddaan ama La-habeeyay
Mawduuc Lab ah
Damaanad: 3 Sano
Nolosha: 5-10 Sano
Kartida Bixinta: 500000 Piece / Cadad bishiiba
Xidhmada Dhoofinta Heerka ah
Tirada (Cadad) 1 - 10000 10000
Est. Waqti (maalmo) 15 In lagu gorgortamo
1.Talaabkan xakamaynta heerka biyuhu waa shey shati leh halkii laga heli lahaa waalka caadiga ee sabeeya.
Waxay xakameysaa sahayda biyaha oo waxay istaagtaa heerka biyaha.
3.Small size, dheecaan biyo badan oo keydin kara in ka badan 60% biyo.
4. miridh diidmo leh oo birta birta ah lagu maroojiyo.
5. Qalabkan xakamaynta heerka biyaha ayaa si weyn loogu isticmaalay biyaha la cabbo ee xoolaha, haanta biyaha, qaboojiyaha hawada, musqusha, barkadda dabaasha, aquarium-ka, kululeeyaha, tamarta qoraxda.
Model Rakibaadda Heerkulka Cabir Cadaadiska shaqada Ku habboon
DTS15 Gudaha ≤100 ℃ Half inji 1/2 ″ 0.01MPa ~ 1.0MPa Biyo Nadiif ah
MUUQAAL QAYB NOOCA Maaddi GUDBINTA CIMILADA CADAADIS SHAQO KU SHAQEYSAN
DT15 1/2 ″ Dhinac Dhinac ah PC GUDAHA ≤100 ℃ 0.1-10KG0.01-1.0MPa
Biyo Nadiif ah
DT20 3/4 ″ Dhinac Dhinac ah
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo lagu xiro biyaha. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan nala soo xiriir, waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa waqtigeeda!
ZHEJIANG WEIER TECHNOLOGY CO., LTD.wuxuu ku yaalaa Wenzhou China. Waxaan nahay mid ka mid ah soosaarayaasha hormuudka u ah keydinta biyaha la xareeyay, oo loogu talagalay soo saarista waalka kontoroolka heerka biyaha ee otomaatigga ah iyo alaabooyinka kale ee la xiriira. Waxaan helnay shahaadooyin badan oo patenti ah. Iyada oo leh koox farsamoyaqaanno xirfad leh, qalab wax soo saar oo horumarsan iyo qalabka baaritaanka saxda ah, waxaan awood u leenahay inaan naqshadeynno iyo OEM si waafaqsan shuruudahaaga gaarka ah. Wax soo saarkayaga ayaa loo dhoofiyay Yurub, Ameerika, Bariga Dhexe, Koonfur Bari Aasiya iyo dalal kale. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha adduunka oo idil xiriir ganacsi oo mustaqbalka iyo is-afgarad dhexmara!
A: Waxaan nahay warshad leh shati (patent). Waxaan damaanad qaadeynaa qiime tartan leh tayo aad u fiican.
S2: Ma bixisaa baarka?
J: Waxaan bixinaa 2-3 tijaabo oo lacag la'aan ah.
Q3: Lacagtee ayaad aqbashaa?
J: Waxaan aqbalnaa lacag bixinta TT (wareejinta bangiga), Hubinta Ganacsiga, Western Union si loo hubiyo inaanay jirin wax khatar ah oo ganacsi inala dhex maro.
Q4: Goorma ayaad keenaysaa rarka kadib bixinta?
J: Waxaan leenahay awood wax soo saar oo ballaaran, taas oo hubin karta waqtiga dhalmada si dhakhso leh xitaa kuwa badan. Waxaan badiyaa haysannaa keyd badan oo badeecooyin ah.
Q5: Ma bixisaa OEM oo habeysaa adeegga?
A: Iyadoo koox farsamo oo xirfad leh iyo kooxda naqshadeynta, waxaan sameyn karnaa badeecooyin habaysan sida ku xusan shaybaaradaada ama sawirkaaga.
S6: Ma haysataa dammaanad tayo leh?
J: Haa, alaabtayada oo dhami waxay daboolayaan 12 bilood oo dammaanad ah oo isticmaalka caadiga ah. Haddii aad wax dhibaato ah qabtid, waad nala soo xiriiri kartaa. Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo suurtagal ah si aan kuugu farxo.
Hore: 1/2 inji xakameyn otomaatig ah oo dul sabeynaya heerka biyaha xakamaynta waalka haanta biyaha taangiga gudaha
Xiga: Nooca Wiir Brand Caaga xakamaynta heerka biyaha ee waalka guryaha sabeeya ee xirta waalka iibka ah
Wiir Brand 1/2 Inch Nooca Gudaha dunta dunta ...
Nooca Wiir oo si buuxda otomaatig u ah xakamaynta heerka biyaha ...
Taangiga biyaha Automatic kubada mini mini sabayn le ...
Nylon Brand nylon xakamaynta heerka biyaha si otomaatig ah ...
Mashiinka Xakamaynta Heerka Biyaha, Xakamaynta Heerka Biyaha Madax, Sifeeyaha Haanta Biyaha, Mashiinka Xakamaynta Heerka Biyaha ee otomaatiga ah ee Haanta Biyaha, Madax Xakamaynta Heerka Biyaha, Sifeeyaha Biyaha Warshadaha,